ईश्वर हरेक ठाउँमा हुन्छन् भने किन देख्न सकिँदैन ? भगवान छन् भने कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/ईश्वर हरेक ठाउँमा हुन्छन् भने किन देख्न सकिँदैन ? भगवान छन् भने कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
ममा आफ्ना शिष्यहरुलाई प्रवचन दिँदै थिए । उनी भक्ति तथा ज्ञानको महत्व सम्झाइरहेका थिए । त्यसैबेला एक चेलाले गुरुलाई सोधे कि ईश्वर हरेक ठाउँमा हुन्छन् भने किन देख्न सकिँदैन ?